Omar Mustafa oo sheegay in qasab looga saaray golaha sare ee xisbiga Socialka | Somaliska
Ka dib shir xasaasi ah oo ay yeesheen xisbiga Social Demokraterna iyo Gudoomiyaha ururka Islaamka Sweden (Islamska Förbundet) Omar Mustafa ayuu warbaahinta u sheegay in lagu qasbay in uu iska casilo xubinimada golaha sare ee xisbiga. Afhayeenka uruka Muslimiinta ayaa sidoo kale sheegay in Omar Mustafa uusan iska iscasilis gudoomiye nimada ururka taasoo markii hore lagu qoray warbaahinta.
Omar Mustafa oo warqad ku qoray wargeyska Aftonbladet ayaa sheegay in warbaahinta Sweden qaasatan wargeyska Expressen uu ka been abuurtay. Waxa uu sheegay in uusan ahayn qof Yuhuuda neceb, waxa uu sidoo kale sheegay in dhibaatada lagu sameeyay ay dhaawacayso xisbiga Socialka.
In uu sii haynayo jakada ururka Muslimiinta iyo in kale ayaan wali cadeyn, balse afhayeenka ururka ayaa sheegay in uu rajaynayo in Omar Mustafa uu sii wadi doono jakadaas marka la qabto shirka sanadka.
Dagaalka lagu qaaday Omar Mustafa ayaa u muuqda mid guud ahaan ku wajahan ururka Muslimiinta oo warbaahinta Swedishku ay ku tilmaameen mid aan dumarka u wanaagsanayn isla markaana Yuhuuda ka soo horjeeda. Warbaahinta qaarkood ayaa xitaa toosh ku daaray xildhibaanka Soomaaliga ah ee Cabdirisaaq Waaberi oo horay u ahaan jiray Gudoomiyaha ururka Muslimiinta.
Qaar ka mid ah xubnaha xisbiga Social Demokraterna ayaa xitaa aflagaado u soo jeediyay diinta Islaamka iyo Muslimiinta ku dhaqan xaafadaha Tensta iyo Rinkeby iyagoo ku tilmaamay dad dambiile yaal ah. Xisbiga Socialka oo taageerada ugu badan ka hela Muslimiinta ku dhaqan Sweden ayaa fadeexaad dhaawacaysaa taageerada uu ka helayo Muslimiinta.
Hada ka dib iska ilaali in aad soo qortid wax aadan hubin, coz shaley waxaa soo qortay in uu booska xisbiga doortay ,,,,,
Ma ahan inaad dhaleeceyn la daba joogto qoraha maqaalkan ileyn xigasho ayuu heystee, laakiin dhaleecee kuwa been abuurka soo qoray sidaas ayey ila tahay. Gaalo iyo yuhuudna awalba ma aysan jecleyn Islaamka balse waxa lagu joogey wadankaan waa Doqladnimadda markaas ha la iska adkeysto, siyaasad hadaad sii gashona kaba daran oo waxaad tahay halbeeg.